क्वान्टम कम्प्युटर बनाउने दौडमा अमेरिका, चीन र भारत लगायतका देश, साधारणसँग के फरक ? « Image Khabar
क्वान्टम कम्प्युटर बनाउने दौडमा अमेरिका, चीन र भारत लगायतका देश, साधारणसँग के फरक ?
२७ मंसिर २०७८, सोमबार १५:०६
काठमाडौं । आगामी दिनमा क्वान्टम कम्प्युटरले संसार र हाम्रो जीवनलाई बदल्नसक्छ ।
यसलाई महत्व दिँदै यसको विकासका लागि अघिल्लो वर्ष भारत सरकारले ८ हजार करोड बजेट निर्णय गरेको थियो । त्यसपछि यो वर्ष अगस्ट महिनाको अन्तिममा भारतले क्वान्टम सिम्युलेटर क्युसिम बजारमा ल्यायो जसबाट वैज्ञानिक र व्यवसायीलाई सजिलो भयो ।
भारत बाहेक अन्य देशले पनि भविष्यमा नयाँ दिशा दिने यो उपकरणमा लगानी गरिरहेका छन् । अमेरिकी सरकारले २०१८ मा नेश्नल क्वान्टम इनिसिएटिभ कानुन बनायो र यसको लागि १ अर्ब २० करोड डलरको व्यवस्था गर्‍यो ।
चीनको कम्युनिष्ट पार्टीले २०१६ मा १३औं पञ्वर्षीय योजनामा क्वान्टम सञ्चारलाई रणनीतिक रूपमा महत्वपूर्ण उद्योगहरूलाई समावेश गरिएको छ ।
बेलायतले २०१३ मा यसको लागि राष्ट्रिय रणनीति बनायो । २०१६ मा क्यानडाले यो उपकरणमा ५ करोड क्यानेडियन डलर लगानीको घोषण गर्‍यो । यो बाहेक जर्मनी, फ्रान्स, दक्षिण कोरिया, रुस, जापान र गुगल, अमेजन, माइक्रोसफ्ट जस्ता कम्पनीहरू पनि यो उपकरणमा लगानी गरिरहेका छन् ।
क्वान्टम कम्प्युटरको चर्चा २०औं शताब्दीको सुरुवातदेखि भएको थियो । यो त्यहि समय हो, जब अल्वर्ट आइन्ट्यान्टले संसारलाई ‘थेउरी अफ रिलेटिविटी’को ज्ञान दिएका थिए ।
डा. घोषले क्वान्टम कम्प्युटरको परियोजनामा काम गर्दा आफूलाई आनन्द लागिरहेको बताउँदै यसको अवधारणाले आफूलाई क्रान्तिकारी बनाएको दाबी गरिन् । अहिले भइरहेको प्रक्रियाले भौतिक विज्ञानभन्दा फरक सिद्धान्तबाट काम गर्ने उहाँको धारणा छ ।
सधारण कम्प्युटरले एक वा शून्यमा काम गर्छ भने क्वान्टमले दुवै माध्यमबाट काम गर्ने उनको भनाइ छ । आफू कुनै दोधारमा परेको अवस्थामा साधारण कम्प्युटरले भन्दा यसले धेरै छिटो काम गर्ने उनको दाबी छ ।
‘क्वान्टम कम्प्युटरले साधारण कम्प्युटरले गर्ने सबै काम गर्छ,’ उनी भन्छन्, ‘क्वान्टम कम्प्युटरले केही घण्टामा गर्ने काम साधारण कम्प्युटरलाई एक जुनी भन्दा पनि धेरै समय लाग्छ ।’
हात थाप्दै राष्ट्रिय आविष्कार केन्द्र
आविष्कार केन्द्रलाई इजरायली सरकारको ‘हाइटेक क्लास रुम’ ल्याब सहयोग